यसकारण हामीले कांग्रेससँग गठबन्धन गर्यौं – Sajha Post
यसकारण हामीले कांग्रेससँग गठबन्धन गर्यौं
साझापोस्ट	२७ वैशाख २०७९ २२:३६
नेपाली कांग्रेस सहित अरु दलसित चुनावी सहकार्य गर्यो भनेर अहिले हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चामाथि एमाले र दरबारिया शक्तिहरुले प्रहार गर्ने गरेका छन । र, विभिन्न प्रश्नहरु उठाईरहेका छन । यसको जवाफ पनि हामीले दिनुपर्ने छ र दिई पनि राखेका छौं ।
०७४ मा एमालेसित चुनावी तालमेल किन भयो ?
०७४ सालमा संघीय संसदको चुनाव हुनु अघि नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताले बालुवाटारमा बोलाएर चुनावी सहकार्यको प्रस्ताव गरे । त्यतिबेला देउवासहित कांग्रेसका सबै शीर्ष तहका नेताले कांग्रेसको भोटले तपाइँहरु जहाँ–जहाँ जित्नुहुन्छ भन्नोस हामी सबै ठाउँमा सहयोग गर्छाैं, तर वाम गठबन्धनमा नजानोस भन्नुभयो । घण्टौं छलफल भयो । तर हामीले देउवाको त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्यौं र भन्यौ–तपाइँको पार्टी भित्र हिन्दु राज्य फेरि कायम गर्नुपर्ने, गणतन्त्र उल्ट्याउन लाग्नेहरु छन, त्यसकारण हामी सहकार्य गर्न सक्दैनौं ।’ त्यतिमात्रै होईन, संविधान बनाउने बेला भारतीय हस्तक्षेप हुँदा समेत कांग्रेस नबोलेकोले हामीले चुनावी सहकार्य गर्न मानेनौं । जबकी सिटको तालमेलको हिसाबले हामीलाई कांग्रेससित मिल्दा फाईदा थियो । किनकी कांग्रेसले हामीलाई बाग्लुङ, प्यूठान, अर्घाखाँची र डोटीमा समेत सहयोग गर्छाैं भनेको थियो । तर राष्ट्रियता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रका लागि हाम्रो प्राथमिकता वामपन्थी गठबन्धन थियो । त्यसैले हामीले एमाले सहितको वामगठबन्धन गर्यौ । र, एमाले–माओवादी सहितको वामगठबन्धनले ठूलो जनमत प्राप्त गर्यो । एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता समेत भयो । उनीहरुको सरकारलाई हामीले समर्थन पनि गर्यौं ।
एमाले र ओलीको विरोध हामीले किन गर्यौं ?
हामीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई समर्थन गरेका थियौं । तर चुनावमा गठबन्धन गरेर सरकारको समर्थनसम्म गरेका हामीले ओलीकै कारण सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आयो । किनकी ओलीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरे त्यो पनि एकपटक होईन, दुई दुई पटक । पार्टी भित्रको विषयलाई लिएर विनाकारण उनले संसद भत्काए । यसमा प्रतिगामीहरु खुशी भए । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता विरोधी दरबारिया शक्तिलाई उनले खुशी बनाउने काम गरे । त्यसकारण हामी ओलीको विरुद्धमा उभियौं । किनकी त्यो विशुद्ध संसद विघटन मात्रै थिएन, त्यो प्रतिगमन तर्फको यात्रा थियो र गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता विरोधी दरबारिया शक्ति र विदेशी शक्ति पनि ओलीका माध्यमबाट ०७२ सालको संविधान मास्न उद्दत थिए । त्यसैले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षार्थ हामी ओलीको विरुद्धमा गयौं, जुन आवश्यक थियो र छ ।
हाम्रो विरोध किन भैरहेको छ ?
०७७ साल पुष ५ गते पहिलो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि हामीले यो परिवर्तन उल्ट्याउने तर्फको यात्रा हो भन्यौ र त्यसको कडा प्रतिवाद गर्यौं । यही सन्दर्भमा हामीले संघीय सरकार मात्रै होईन, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लियौं । त्यतिबेला हामीलाई केपी शर्मा ओलीले फकाउने निकै प्रयास गरे । तर हामीले मानेनौं किनकी विषय परिवर्तनका एजेण्डाको थियो । उनले चुनाव गर्ने भनेपनि चुनाव गर्न विघटन गरिएको थिएन । त्यसैले हामी संसद विघटनको विरुद्ध लाग्यौं र अदालतले पूनस्र्थापना पनि गरिदियो र नयाँ सरकार बन्यो । हामीले पनि समर्थन गर्यौैं । त्यतिमात्रै होईन, यो गठबन्धन बन्नु पर्छ भनेर हामीले प्रस्ताव गरेका हौं । शुरुमा कांग्रेस, माओवादी र माधवुकमार नेपालहरुले त्यति ध्यान दिएका थिएनन । त्यति हुँदा हुँदै पनि स्थानीय स्तरमा हामीले सहकार्यको पहल गर्दै गयौं । जब ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरे तब मात्रै उनीहरुलाई हामीले भनेको कुरा ठीक लाग्यो । किनकी यो प्रतिगमन हो यहीं रोकिन्न भनेका थियौं भने उनीहरुले अदालतले बदर गरेपछि अब ओलीले केही गर्दैनन भन्ने ठानेका थिए, तर त्यसो भएन । हाम्रो कार्यालयमा कहिल्यै नआएका माधवकुमार नेपाल र सुरेन्द्र पाण्डे एक दिन खोज्दै खोज्दै आए र दुई घण्टा गठबन्धन बनाउने विषयमा छलफल भयो । र, यो गठबन्धन अगाढि बढ्यो । यही बीचमा सरकारले एमसीसी पारित गर्यो । हामीले त्यसको विरोध गर्यौ । एमाले र दरबारियाहरुलाई लागेको थियो कि अब हाम्रो पार्टी गठबन्धनबाट अलग हुन्छ । हामीले त्यसो गरेनौं । किनकी गठबन्धन बन्नुको औचित्य अझै पुरा भएको छैन । त्यसैले एमाले र दरबारियाहरुले ‘एमसीसीको विरोध गर्ने तर एमसीसी पारित गर्नेसित गठबन्धन गर्ने, संघीयताको विरोध गर्ने तर संघीयता पक्षधरसित गठबन्धन गर्ने’ भनेका छन । विरोधकाबीच पनि सहकार्य हुन्छ हिजो पनि भएको हो र अहिले पनि भएको छ । यो संयुक्त मोर्चा र कार्यगत एकता सम्बन्धी नबुझेकाले र बुझेर पनि बुझ पचाउनेहरुले गर्ने कुरा हो । ०१७ सालमा राजा महेन्द्रको कदमपछि, ०४६ र ०६२–०६३ मा सहकार्य भएकै हो ।
किन नगर्ने अहिले एमाले र ओलीसँग सहकार्य ?
पाँच दलीय गठबन्धन गर्नुको औचित्य अहिले पनि पुराभएको छैन । प्रतिगमन अहिले पनि हारेको छैन । संसद विघटन गर्ने प्रयास असफल भएपछि ओलीले संसद चल्न दिएका छैनन । दरबारियाहरु, हिन्दूवादीहरु संसद विघटन ठीक थियो भनिरहेका छन, ओलीले पनि त्यही भनिरहेका छन । उनीहरुको कुरा मिलिरहेको छ । त्यही भएर ओलीले दरबारिया शक्तिसित सहकार्य गरिरहेका छन । उनले पशुपतिमा त्यसै पूजा गरेका होईनन, संसद विघटन त्यसै गरेका होईनन, राजावादी र नेपाललाई हिन्दू राष्ट बनाउन चाहने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई खुशी पार्ने प्रयास हो त्यो । ओलीका गतिविधि सबै गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध छन । उनी आफै पनि चाहेर गणतन्त्रको पक्षमा आएका होईनन । दरबारिया र केही विदेशी ओलीलाई निमित्त बनाएर परिवर्तन उल्टयाउने खेलमा लागेका छन, त्यसैले पनि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता रक्षाको लागि पनि कांग्रेस सहितको गठबन्धनमा हामी छौं, जबकी ०७४ मा कांग्रेससित गएको भए फाईदा हुन्थ्यो अहिले एमालेसित सहकार्य गरेको भए फाईदा हुने स्थिति हो । तर हामीले पार्टीको फाईदा होईन, परिवर्तनका उपलब्धिहरुलाई बचाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएका हौं ।
संघीय संसदको चुनावसम्म हुनुपर्छ गठबन्धन
यो स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धनमा ईमान्दारित देखिएन । यसमा कांग्रेस र माओवादीमा समस्या देखियो । गठबन्धनका निर्णयहरु पालना गराउने सन्दर्भमा कांग्रेस र माओवादीमा गम्भीर समस्या देखियो । उनीहरुले निर्णय नै कार्यान्वयन गराउन सकेनन । त्यति मात्रै होईन, एमालेसँग समेत उनीहरुले तालेमल गरे । जबकी हामीले त्यस्तो गरेनौ । तथापि यो गठबन्धन प्रदेश र संघीय संसदको चुनावसम्म रहनुपर्छ । किनकी हाम्रो मुख्य उद्देश्य प्रतिगामी उद्देश्य परास्त गर्नु असफल पार्नु हो ।
-राजमोका अध्यक्ष केसीसित गरेको कुराकानीमा आधारित
chitra bdr kc